Mampifangaro ny findainao sy ny solosainao amin'ny kinova 5 an'ny Microsoft Launcher | Androidsis
Ny andiany 5 an'ny Microsoft Launcher dia manambatra ny findainao amin'ny PC tsy toy ny teo aloha
Na dia tsy mpankafy aza ianao Microsoft Launcher, kinova 5, navoaka androany, andian-dahatsoratra vaovao tonga izay tsy azontsika lazaina hoe tsia. Ny tena zava-bitan'izy ireo dia ny fampifangaroana ny findainao Android amin'ny Windows PC amin'ny fomba mahavariana ary izany dia hanome elatra ho an'ny maro hanandrana ny mpandefa fampiharana an'ny Microsoft.
Tonga miaraka amin'ny kaonferansa Microsoft izay misy ilay orinasa amerikana nanambara vokatra marobe mifandraika amin'ny teknolojia vaovao. Anisan'izany ny rindrambaiko, iray amin'ireo olo-masina sy famantarana an'ity orinasa ity, ary izany dia mitarika antsika hiresaka anio momba ny kinova 5 an'ny Microsoft Launcher.
1 Microsoft Launcher amin'ny zavatra rehetra
2 Ny Timeline, ny zava-baovao
3 Ahoana no fomba fampiasako ny Timeline?
Microsoft Launcher amin'ny zavatra rehetra
Ity kinova vaovao an'ny mpandefa Microsoft ity dia tonga miaraka amin'ny fanavaozana ny Windows 10 Oktobra vaovao; toy ny kinova mahery hafa ho an'ny SwiftKey (Eny, avy amin'ny Microsoft izy io). Raha mendrika io fanavaozana vaovao io dia natao ho an'ny fampiasa findainao sy ho an'ny fandaharam-potoana Timeline, ankoatra ny zavatra hafa mamela anao hitaratra izay anananao eo amin'ny efijery ny fitaovana Android anao ka ny fampifangaroana eo amin'ireo fitaovana roa ireo dia mihoatra ny feno.
Ary ny Microsoft Launcher dia fomba iray hafa mampifandray ny finday Android amin'ny PC Windows 10. Iray amin'ireo safidy vaovao manaitra indrindra ny Timeline. Manokana, manan-kery ho an'ny ny fampandrenesana rehetra azonao amin'ny findainao Android dia azo jerena avy amin'ny solosainao. Izany hoe hanana ny takelaka fampandrenesana momba ny findainao eo amin'ny efijery PC-nao ianao mba hahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny alàlan'ny totozy sy ny tsindry.
Ny fiasa vaovao hafa an'ny kinova 5 an'ny Microsoft Launcher dia:
About us- Nanavao ny zava-baovao tamin'ny Microsoft News.
Fotoam-potoana amin'ny finday: ny hetsika rehetra avy amin'ny PC sy telefaoninao dia ho hita amin'ny telefaona Android anao.
Cortana: Mampiasà Cortana handefasana emial amin'ny mailaka marobe.
Afaka mahita ny toerana misy ny zanany ny ray aman-dreny izao.
Ny Timeline, ny zava-baovao
Mila mamela toerana manokana ho an'ity asa vaovao antsoina hoe Timeline ity ianao hamela anao handray ny fahana fampandrenesana. Mizara ho Glance io, vonona ny hahafantatra amin'ny zava-mitranga rehetra ny androny, ny vaovao tokony hampahalalana tsara, ary ny tabilao Timeline izay ahafahantsika miditra amin'ny zavatra rehetra nataontsika teo anelanelan'ny Windows sy Microsoft Launcher.
Zava-dehibe ny milaza izany tsy maintsy ampifanarahinao amin'ny kaonty Microsoft ihany ny zava-drehetra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy mila mampiasa kaonty Microsoft mitovy ianao na amin'ny fitaovanao Android miaraka amin'ny Microsoft Launcher sy amin'ny PC-nao ary nanomboka io fivoriana io.
Raha efa mampiasa ny rindranasa telefaona isika dia hanana fitaovana lehibe hafa eo an-tanantsika isaky ny miasa amin'ny PC isika. Ny tiako holazaina dia azonao atao midira amin'ny zava-drehetra amin'ny findainao rehefa fitaratra. Safidy mahaliana izay manampy kalitao ho an'ny fampiharana sy programa Microsoft ho an'ny Android-nao.
Ahoana no fomba fampiasako ny Timeline?
Mba hampiasa ny Microsoft Launcher amin'ny kinova 5 sy ny Timeline-ny, ianao dia mila manana ny PC amin'ny Windows 10 havaozina amin'ny kinova Oktobra. Ireto misy dingana tokony harahina:
Afaka mandeha amin'io ianao rohy hampidinana azy. Tsy mila manao afa-tsy ianao manomboka «fanavaozana» sy Microsoft hikarakara ny ambiny hanombohana ny fisintomana.
Haharitra kely izany, amin'izay ianao afaka mandeha amin'ny dingana manaraka hametrahana ilay mpandefa.
Vonona sy nohavaozina ny PC, ho avy izao ny fametrahana ny Microsoft Launcher:
Tsy maintsy mandalo s iray isikaerie ny fikirana toy ny temotra, ny fifidianana mialoha ny kaonty Hotmail ary dingana kely tsy misy dikany hafa.
Vita izany rehetra izany, ho azonao izany Microsoft Launcher miaraka amin'ny Timeline ary ireo fiasa vaovao rehetra hampiarahana ny findainao Android amin'ny PC Windows 10. Ny fahatongavanao manontolo mba hitombo be dia be ary ny traikefa eo amin'ny findainao sy ny PC dia manampy isa maro. Misy ampahany mahaliana ny Android sy ny Windows hiara-miasa amin'ireo tranonkala ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny andiany 5 an'ny Microsoft Launcher dia manambatra ny findainao amin'ny PC tsy toy ny teo aloha
Ny safidy tsara indrindra ho an'ny PlusDeDe !!
Ny Firefox Focus dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ny interface sy ny motera fandikana vaovao